Actor Vadim Michman: Biography
Vadim Michman - yakakurumbira Russian mutambi, zvakanakisisa rinozivikanwa zvokuridza "Monte Cristo" kutungamirirwa Aline Cevik, uye nokudaro vanoratidza kuti zvirongwa se "The Sound of Music," The Valenza Town Musicians », påvirket Mia,« Onegin, "" Pfuma Island "! "Romeo uye Juliet". Naiyewo vairidza mabasa anoverengeka firimu. The Musoro Nyaya yanhasi - the Biography zvinhu uye Vadim Midshipman.
Future Artist akaberekwa muna 1986. baba vangu aiva injiniya, mai vake akashanda se mishonga. Achiri muduku, Vadim akawana vaiva nemano Vocal, maererano nako akatanga achiita mumapoka "buffoon" uye "Runako".
Vadim akadzidza kuimba uye akaramba akahwina pamitambo dzakawanda. Pakati mangwanani Unobata ake - mibayiro ari makwikwi "Manzwi ari XXI remakore", iro "Pearl kweSiberia", "Tariro Europe", "ROZA Vetrov" uye vamwe vakawanda.
gamba chokurondedzera nhasi vakasvika guru muna 2003. Vadim Michman akapinda Institute of Contemporary Art, ari Pop dhipatimendi. In ake mudzidzi makore akanga achishingaira muzvitendero zvakasiyana-mabasa, kusanganisira "Ugra springboard" uye mimhanzi boka "220 Volts".
Muna 2008, Vadim Michman akagamuchira chitupa. Mwedzi mishomanana gare gare akanga starred mu zvokuridza "Monte Cristo." At moyo ichi Russian mashoko, sezvamunoziva, nyaya yakakurumbira inoshanda Aleksandra Dyuma. Kuratidzwa kwe "Monte Cristo" rakaitwa muna 2008. pashure pemakore mana - shanu ramazana gore dzinoratidza. Vadim Michman muchinangwa waivako ichi Benedetto - mbavha wechiduku, vasiyiwa nevabereki vavo vachiri vaduku.
The vachikanda kuti "Monte Cristo" Anonziwo zvaisanganisira Igor Balalaev, Valery Lansky Alexander Marakulin Alexander Golubev, Lyudmila Svetlov, Lika Rulla.
Vamwe nguva pashure kuwanika pamusoro guru Danho muduku mutambi starred mu firimu "YAMBUKIRAI NHANHO kutenga" Igor Korobeinikova. Vadim airidza basa mudzidzi Jora Midshipman. Zviri saka rekunyepedzera pasi izvo anozivikanwa Russian mutambi. Pashure pezvose, zita rake chairo - Kozlov. Kuratidzwa kwe firimu "YAMBUKIRAI NHANHO Utenge" yakaitwa March 2011.
Other musicals vane kutora chikamu kwe Vadim Midshipman
Muna 2009, kuti mutambi akatanga pamwe "Office Ngirozi" - zvokutenga sangano riitwe firimu basa. Muna 2010, gamba chokurondedzera yanhasi chikakandirwa zvokuridza "Rudo uye vasori" Yegor Druzhinin. Panguva ino, Vadim Michman vakaita mukuru French. Yakakurumbira zvemimhanzi uine Vadim Midshipman - "The Sound of Music." Basa iri, akawana basa Rolf Gruber.
In June 2016 Vadim Michman akabvumirwa kuti basa zvokuridza "Muiti Me Kana Raunogona," inobva eponymous firimu Stivena Spilberga, uye akatora chikamu mu "Valenza Town Musicians" zvirongwa, "The Little Mermaid."
Muna 2011, takatanga vapfura firimu pamusoro Yuri Gagarin. Kuratidzwa anoratidza kwakaitika muna 2013. Firimu rinoratidza uduku, refu mwedzi wokugadzirira kutiza, kurwa nokuda ushasha uye nedzimwe nguva zvinokosha Biography wokutanga cosmonaut. The creators of mifananidzo hazvibhadharwi kuteerera ukama protagonist wake. Vadim Michman (hunomirirwa pamusoro - mumwe furemu kubva firimu pamusoro Gagarin) vaitambira mumufananidzo uyu Germana Titova. Iye panzvimbo shamwari dzaiva Yaroslav Zhalnin, Vladimir Steklov, Mikhail Filippov, Victor Proskurin, Nadezhda Markina.
Maererano kuziva mutambi, basa German Titov kwaari waiva chipo chaicho. Zvinonzi akati pakutanga auditioned kuti wakasiyana basa. Ndichishanda parwendo Titov akanga anonakidza zvikuru Vadim Midshipman zvikurukuru nokuti haisi vemungano hunhu, upenyu chaihwo munhu. Uye zvikuru chinokosha munhau. Pakugadzirira filming ari mutambi ndakataura pamwe muchadenga kunoongorora, uyo aiziva hunhu hwake.
Muna 2016 takatanga anokanda mifananidzo "Crew", iro vanoiona kazhinji vachinzwisisa somunhu remake pakati mafirimu Aleksandra Mitty. Zvisinei, kutaura zvazviri, zvarongwa firimu iri rine zvishoma chokuita nyaya, iro rinotaura wokutanga mumhuri njodzi firimu. Kuratidzwa kwe "The Crew," nomudzimu Nikolai Lebedev kwakaitika muna April 2016. Starring Vladimir Mashkov uye Danila Kozlovsky. Vadim Midshipman ari firimu firimu angosimuka zvishoma chikamu.
Firimu "bhonasi" vachasunungurwa muna 2017. Director of firimu - Valeria paGati warsaw. Nomufananidzo zviitiko muupenyu zvake Guy Ivan, uyo kamwe akapa vane rokuzvarwa mutambi. The protagonist iri utachiona rapping, uye pakupedzisira anotanga kwete chete kuteerera mumhanzi, asiwo anyore yake. Iye anopiwa zita remadunhurirwa rokuti bhonasi. Shamwari munhu zvinodhaka kunomuunzira kuMoscow, uko rinotanga chaiye uchinzvera gamba Midshipman. Zvichida, firimu achaita vakavhengana Zvinoitwa vatsoropodzi, uyewo mamwe firimu inoshanda Gay Germaniki, kuti, chero zvazvingava, Vane pesvedzero inobatsira pamusoro kukurumbira pakati kutungamirira murume.
Chii chinozivikanwa nezvoupenyu kuti Midshipman overs Vadim?
Ichi zvikuru zvinozivikanwa. Vadim Michman vana kuroorwa iye asingadi, vakawanda nguva inopedzerwa kushanda. Mubvunzurudzo pamwe Vadim Michman akabvuma kuti panguva ino chinhu chikuru muupenyu hwake kuti unyanzvi. Zvisinei, nokufamba kwenguva zvaunoda kushandura.
Top-njodzi kufirimu. Chii mabhaisikopu kuona?
Zvinosetsa Queen - Dzhoan Riverz
"Nharire": vatambi uye firimu mamiriro
Kuonana pamusoro Elbe. The chiitiko mararamiro munhoroondo
Vangani mwaka vachava "Game of Zvigaro zvoumambo" uye chikuru zvinetso kupfura kwacho
The dzinoti "Next": vatambi uye mabasa. "Trace" - a Russian mhosva yepaTV
Elizabeth I Chirungu: photos Biography, panguva yaitonga amai
Stels Navigator 830: tsananguro uye nokurondedzerwa
Billy Bob: mafirimu, biography, hupenyu hwehupenyu
Kuparadzwa kworudzi - chii ichi? Shoko rokuti "kwevanhu." Yaiurayiwa vanhu munhau
Kubva chii kupfeka vakadzi tai?
Iva basa nyanzvi Chinyorwa
Sei kuva mwana muna 3 months? Kukura mwana muna 3 months: unyanzvi. kukura kwomuviri kwemwana matatu
Massager "Muumbi wemuviri": tip uye vzlyad kubva
Bus Vilna: chinangwa uye kushandiswa mitemo
Syuzanna Klark - ne Rowling uye Tolkien
Print Server: a-software kana Hardware?
Dmitry Kayumov - midfielder kuti FC "tochi"